ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး Rooftop Bar များ | yathar Magazine
မွန်းကြပ်မှုတွေကနေ ခဏထွက်ပြီး Rooftop Bar မှာ လေညှင်းခံရင်း ပျော်စရာအချိန်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ကြည့်ကြမယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရှုခင်းကိုကြည့်ရင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲကုန်ဆုံးမလား? ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ပဲကုန်ဆုံးမလား? မွန်းကြပ်မှုတွေကို လျော့ချဖို့ Rooftop Bar ကို သွားကြမယ်။
Rooftop Bar ကောင်းကောင်းထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Atlas Rooftop Bar ရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရှုခင်းကြီးကို ကြည့်ရင်း rooftop bar မှာ ပင်ပန်းမှုတွေကို ဖျြေောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ရှုခင်းလှလှနဲ့ Rooftop Bar ကြီးရဲ့ လိပ်စာနဲ့ information ပြည့်ပြည့်စုံစုံကို
https://yathar.com/shop/99 မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ရန်ကင်းမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ Rooftop Restaurant တစ်ခုကိုပြပါဆိုရင် Yankin Heights Rooftop Restaurant ရှိပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ Bar တစ်ခုမလို့ ပင်ပန်းမှုတွေကို ဖျြေောက်ပေးနိုင်မှာ သေချာပါတယ်။
ဆိုင်ရဲ့ information ပြည့်ပြည့်စုံစုံကို https://yathar.com/shop/2563မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
ဗားကရာလမ်းမပေါ်က Mr.Tony မှာ နေ၀င်ဆည်းဆာကြီးကိုကြည့်ပြီး သာယာဖွယ်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကလည်းသင့်တင့်တဲ့အပြင် နေရာထိုင်ခင်းကလည်း အဆင်ပြေတာကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူအသွားသင့်ဆုံး Bar တစ်ခုပါ။ ထိုင်ခုံနေရာအရမ်းမများတဲ့အပြင် လူလည်းပြည့်တတ်တာကြောင့် ကြိုတင် Booking လုပ်ထားတာက အကောင်းဆုံးပါ။
ဆိုင်ဖုန်းနံပါတ်နှင့်တကွ ဆိုင်၏ information ပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုhttps://yathar.com/shop/2559 မှာကြည့်လို့ရပါတယ်။
Rooftop မှာ လန်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် Vista Rooftop Bar ကလည်း မမေ့သင့်တဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။
ဆိုင်၏ information ပြည့်ပြည့်စုံစုံကို
https://yathar.com/shop/111 မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မြို့လယ် downtown မှာရှိတဲ့ Sakura Tower အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကုန်ဆုံးလို့ရပါတယ်။
ဖုန်းနံပါတ် နှင့်တကွ ဆိုင်ရဲ့ information ပြည့်ပြည့်စုံစုံကို
https://yathar.com/shop/317 မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Yangon International Hotel ပေါ်က Sky Bar မှာ Stress တွေကိုဖြေဖျောက်ကြမယ်။
လန်းတကာ့လန်းတဲ့ အလန်းလေးတွေအတွက် Sky Bar ရှိပါတယ်။
ဆိုင်၏ information ပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုhttps://yathar.com/shop/2561 မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
The Breeze Bar က သင်္ကန်းကျွန်းမှာလည်း နာမည်ကြီးတဲ့ Rooftop Bar တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လှပတဲ့ ရှုခင်းတွေနဲ့ လေအေးအေးလေးမှာ လန်းချင်သူတွေအတွက် The Breeze Bar ကို မမေ့သင့်ပါဘူး။
ဆိုင်ရဲ့ information နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကို
https://yathar.com/shop/793 မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ငမိုးရိပ်ချောင်းကြီးဘေးက The River Bar အပေါ်ကနေ ရှုခင်းလေးတွေကြည့်ရင်း အေးအေးဆေးဆေးထိုင်လို့ရပါတယ်။ ငမိုးရိပ်ချောင်းကြီးရဲ့ ဘေးမှာဖြစ်လို့ အေးချမ်းတဲ့ feeling ကိုခံစားစေရမှာပါ။
The River Bar ရဲ့ ဆိုင် information ပြည့်ပြည့်စုံစုံကို
https://yathar.com/shop/336 မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ Rooftop Bar တစ်ခုကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ The Penthouse ကိုပဲ ညွှန်ပြပါရစေ။
The Penthouse Bar ရဲ့ information ပြည့်ပြည့်စုံစုံကို
https://yathar.com/shop/92 မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Download Link https://s.yathar.com/apps